Professional staxx pallet pallet jack mpanamboatra
HomeFiara sy kojakojaFitaovana sy kojakoja fiarakodia hafaProduct
3 volana ago
Staxx Professional Staxx Lithium Pallet mpanamboatra Jack, ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanjifa sy ny staxx dia azo amboarina. Tianay ny hampifanaraka ny fanohanantsika, toy ny paikady marketing, aorian'ny serivisy amin'ny fivarotana ny filan'ny mpiara-miasa aminay.
Tsy misy fanehoan-kevitra voaray
Ny antsipirian'ny vokatra
Ny kalitaon'ny vokatra dia nanohitra ny fitsapana ny fotoana.
1.Mandoa vola am-pandoavam-bola sinoa izahay miaraka amin'ny fandoavam-bola 10% sy ny fandanjalanjana amin'ny b.
Ny fenitra fandoavam-bola fenitra dia 30%, ho an'ny teny fandoavam-bola manokana, mila mampihatra amin'ny fitantanana aho amin'ny fanohanana manokana.
2. Mila ny fanampianao aho amin'ny fotoana fandefasana, 40 andro dia lava loatra amin'izao fotoana izao. Azafady mba jereo hoe inona ny fotoana fandefasana fohy, ohatra ny 10 ka hatramin'ny 15 andro?
Momba ny fotoana fitaterana, raha ny tena izy dia manondrana be dia be isam-bolana, ary ny tsipika famokarana be dia be foana. Raha feno boaty feno izy dia tsy maintsy manaraka ny filaharana filaharana. Saingy tamin'ny voalohany dia 36 unit ihany, efa nanao fotoana manokana nitarika manokana aho, 20 andro. Manantena aho fa ho hitanao fa ekena izany.
3. Afaka mitondra entana ao amin'ny vilia Thesame ve isika?
Eny tokoa dia afaka mitondra entana ao anaty fitoeran-javatra iray ihany isika. Raha ny marina, ny entana rehetra vokarintsika ao Shina dia afaka mampifangaro ny boaty misy ny boaty toy ny stacker manual, ny latabatra fiakarana scissor, ny kamiao avo lenta, kamiao mandeha amin'ny herinaratra, ny kamiao herinaratra. Ny iray amin'ireo hahasoa antsika dia ny ahafahantsika manolotra anao ny tsipika feno trano fitehirizam-bokatra, ao anaty fitoeran-javatra iray ihany.
1.Misy manolotra vokatra izay ho tia ny mpampiasa. Ny staxx dia mahatakatra ny tena filàn'ny mpampiasa farany eo an-tsena. Amin'ny alàlan'ny fisainana manavao, tsy mitsahatra ny fanatsarana ny fiasa sy ny fampiononana ireo vokatra isika ary mahazo patanty 10 mahery, ao anatin'izany ny fitantanana diagnostika Intelligent, ny vahaolana tery ao amin'ny Moonwalk, dia ny fanaraha-maso lavitra, sns.
2.Manao ekipa mpanamboatra matihanina izahay.
3. Manana ekipa mpiasan'ny serivisy matihanina aorian'ny asa.
4. Manana matihanina r&D Team.
Momba ny staxx
Ningbo Staxx Fitaovana Fitaovana Fitaovana Fitaovana Co., Ltd - Mpanamboatra fitaovana momba ny serivisy matihanina. Hatramin'ny nanamboarana ny orinasa ny orinasa tamin'ny 2012, dia niditra tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny famokarana sy ny fizarana fitaovana fitehirizana. Miorina amin'ny orinasa orinasa, ny vokatra, ny rafi-pitsaboana ary ny rafi-pitantanana, ny staxx dia namorona rafitra mpamatsy iray feno, ary namorona sehatra famatsiana tokana, ary misy mpivarotra 500 mahery any an-trano sy any ivelany. Tamin'ny taona 2016, ny orinasa dia nisoratra anarana ny marika vaovao "staxx". Miezaka manavao ny staxx, mba hanohy hatrany ny fangatahana tsena sy handroso miaraka amin'ny fiaraha-monina miova mandrakizay. Teny an-dalana, ny staxx dia nahazo ny fahatokisana sy fanohanana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka maneran-tany.
Mety ho tianao koa ianao
Merry Krismasy rehetra ny namako-staxx
NY TENA fihetseham-po amin'ny fampiasana STAXX Lithium PALLET Truck
Ny fiarovana ny fampiasana bateria Lithium-staxx Lithium-ion
Fiofanana mpiasa vaovao staxx ho an'ny teknolojia lithium
Ny kamiao paleta staxx dia manamora ny asanao
Andron'ny asa an-tsokosoko Staxx - Staxx
Staxx pallet kamiao vaovao Design Design Protection
Adiresy tsara indrindra jiro elektrika an-tsehatra Stacker Leg Stacker vidiny - staxx
Ny fiteninao ankehitriny:
Sehatra ifanakalozana horonan-tsary ho an'ny fampiroboroboana ny marika manerantany sy ny fahafaha-manao asa manerantany
Momba ANAYpolitika Fiarovana fiainan'olonaFepetran'ny serivisy
Te-ho voalohany hahafantatra ianao rehefa misy horonantsary vaovao misy? Misoratra anarana amin'ny Newsletter mailaka isan-kerinandro. Tsy misy spam!